Ulwazi Programme seluke laloba kaningana ngoMemulo. Kule ndatshana ngivezwa ama-video ezinye zezinto ezenzekayo uma kumulwa emva kokucelwa kwesihlobo esihle. Lapha ngaphezulu sibona sibona intokazi esanda kucelwa nensizwa esanda kucela lentokazi begiya bebhiyoza esigcawini kanye nezihlobo zabo. Lokhu-ke kuyinto eywayelekile uma umcelo uhambe kahle kwaze kwafika esigabeni somemulo. Lapha ngaphezulu sibona ithimba lezinsizwa lisina ngokuzimisela nangendlela … Read more
NgokwesiZulu, ukukhula kumuntu kuhamba ngezigaba zakho. Lezi zigaba zihambisana nemicimbi ethile eyenziwayo, okubalwa kuyo umkhehlo kanye nomemulo kwabesimame. Ngokwesintu, intombazane ayigcagci ingakaze yemuliswe noma ikhehle, okuyizigaba zokukhulisa intombazane kanye nokuyincoma ngokuziphatha kahle. Kuleli khasi, sikhombisa ngama-video umemulo ka Sizile Ngubane, obemuliswa uMzwendoda Nene. Lomemulo ubuseNgilanyoni eMid-Illovo. Lezithombe mdlalo zikhombisa ngokusobala abantu behlobe beconsa ngemvunulo yesintu, … Read more
Umemulo ila kusuke kukhuliswa futhi kubongwa intombazane ngokuziphatha kahle yaze yafika esigabeni esithile sempilo, okulawulwa iminyaka yayo intombazane. Ngokujwayelekile kumuliswa intshikizane esuke isineminyaka engamashumi amabili nanye noma nambili kuyaphezulu. Uma umnumzane ezomulisa indodakazi yakhe eziphathe kahle, uyaye ayihlabele inkomo yomemulo kodwa ngaphambi kokuba kwenziwe lokho, uyaye ahlabe imbuzi ebike emsamo kwabadala emadlozini asekhaya ukuthi … Read more
Categories Culture Tags esigcawini, inkomo, intombi, ubuntombi, umemulo
Last week we wrote about the initiation ceremony for Zulu boys, and this week it’s the turn of the girls, well actually young women. Traditionally umemulo is centred around the idea that a girl has maintained her virginity until she’s ready to find a long-term partner, although supposedly in some contemporary circles women are taking … Read more
Categories News Tags umemulo